भरतपुरको वडा कार्यालयमा सिलिण्डर विस्फोट गराई आगजनी – Korea Pati
March 13, 2019 LeaveaComment on भरतपुरको वडा कार्यालयमा सिलिण्डर विस्फोट गराई आगजनी
चितवन : भरतपुर महानगरपालिका–५ को वडा कार्यालयमा ग्यास सिलिण्डर फिस्फोट भएको छ । शान्ति चोकमा रहेको वडा नम्बर पाँचको कार्यालयमा मध्यरात सबा १२ बजे अज्ञात समूहले खाना पकाउने एलपी ग्यासको सिलिण्डर विस्फोट गराएको प्रहरीले जनाएको छ ।
विस्फोटबाट कार्यालयको भवन क्षतिग्रस्त भएको छ । कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजात जलेर नष्ट भएका छन् । विस्फोट गराएको आशंकामा प्रहरीले राति नै ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान शुरु गरिएको चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी सुशिलसिंह राठौरले बताए ।
राठौरकाअनुसार कार्यालयका कागजपत्र, टायरमाथि ग्यास सिलिण्डर राखेर अगो लगाउँदा विस्फोट भएको हो । सोही विस्फोटका कारण कार्यालयमा आगजनी भएको थियो।
घटनालगत्तै महानगरको दमकल, सुरक्षाकर्र्मी घटनास्थल पुगेर आगो नियन्त्रण गरेका थिए । प्रहरीले घटना विप्लव नेतृत्वको नेकपा कार्यकर्ताले गराएको अनुमान गरेको छ । विस्फोटका कारण स्थानीय त्रसित बनेका थिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला सोही कार्यालयमा सुतली बम विस्फोट गराइएको थियो । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले जिल्लाको सुरक्षा शतर्कता कडा बनाएको बताए । उनले भारतसँगको सीमाक्षेत्र र जिल्लाभर सुरक्षालाई कडा पारेको जानकारी दिए । विस्फोट गराउनेको खोजी कार्य तीब्र बनाइएका छिट्टै दोषीको पह्चिान हुने प्रहरीले दाबी गरेको छ ।
बुटवलमा एक जना कोरोना संक्रमणको आशंकामा अस्पताल भर्ना
March 12, 2020 March 12, 2020 गुरुदत्त न्यौपाने
इयरफोनको प्रयोग धेरै गर्नुहुन्छ ? सावधान !
June 6, 2020 गुरुदत्त न्यौपाने